မိုးနှင့်အတူ မျောလိုက်ချင်တယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိုးနှင့်အတူ မျောလိုက်ချင်တယ်….
Posted by moonpoem on May 11, 2014 in Creative Writing |6comments
တဖွဲဖွဲတဖြောက်ဖြောက် ဖြင့်ကျနေသော မိုးရေစက်တို့ သည် ကောင်းကင်မှသည် စိန်ပန်းနီနီတို့ ကြား၊ ငုဝါပန်းတို့ ကြားမှ တိုးလျှိုးဝင်ရောက်ကာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြလေသည်။ မိုးရေစက်တို့ နှင့်အတူ ပန်းအလှရောင်စုံ၊ စိမ်းလန်းသောမြက်ခင်းတို့ သည်လည်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာလေရာ
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသည် ကြည့်လို့ကောင်းသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပမာ ။
မိုးစက်တို့ တည်ရှိရာ ကောင်းကင်ထက်သို မော့အကြည့် မျက်ဝန်းအိမ်သည် မိုးရေစက်အချို့ တို့ ကြောင့် စိုစွတ်ေ၀၀ါးလာလေသည်။ေ၀၀ါးနေသော မျက်ဝန်းတို့ တွင်တော့ မြင်ယောင်နေမိသည်က အတိတ်က မိုး နေ့ များဆီသို့ …..။
ထစ်ချုန်းမိုးရွာသွန်းသော မိုးနေ့ လယ်ခင်းတစ်ခုတွင် ကျွန်မနှင့်သူ စတင် တွေ့ ဆုံခဲ့ကြသည်။ မိုးနေ့ များတွင်မိုးရွာထဲ လျှောက်သွားရခြင်းသည် နွေ နေ့ များတွင် နေပူပူထဲ သွားရခြင်းထက် အေးချမ်းသည်ဟူသော အယူအဆများဖြင့် ကျွန်မတို့ မိုးထဲလေထဲတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရှိလမ်းများပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းခဲ့ဘူးကြသည်။
ကော်ဖီဆိုင်ထဲတွင် ထိုင်ကာ ရွာနေသောမိုးကို ငေးကြည့်ရင်း မိုးနှင့်ပတ်သတ်သော သီချင်းတွေ၊အနုပညာအကြောင်းတွေ ပြောကြသလို၊အနာဂတ်ဧ။် ခြေလှမ်းအချို့ အကြောင်းတွေ ပြောကြရင်း အတူတူ အချိန်ကုန်ခဲ့ကြဘူးသည်။
မိုးရာသီ ၂ရာသီစာသည် ပျော်ရွှင်မှုများကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၃ရာသီမြောက် မိုးရာသီသည်တော့ ကျွန်မအတွက်ရော သူ့ အတွက်ပါ ပျော်ရွှင်မှုအစား ဘ၀ဆိုသည့်အရာ၊ မသေချာသော အနာဂတ်စာမျက်နှာများ၊မရေရာသော မျှော်လင့်ချက်များဝင်ရောက်လာသောအခါ နားလည်မှုတွေ သည်းခံမှုတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး ခါးသီးမှုတွေသာ ယူဆောင်လာခဲ့သည်လေ။
ခါးသီးခြင်းတွေ ခံရဖန်များလွန်းသော တစ်နေ့ တွင်တော့ အချစ်ဧ။် ပထမလမ်းခွဲဖြစ်သော ပေါင်းဖက်ခြင်းအစား ဒုတိယလမ်းခွဲဖြစ်သော စွန့် လွှတ်ခြင်းကိုသာ ကျွန်မတို့ ရွေးချယ်ခဲ့လိုက်ပါသည်။နာကျင်ခြင်း ခါးသီးခြင်းတို့ ဖြင့် ချစ်နေတာထက် စာလျှင်တော့ လွမ်းမောခြင်း တမ်းတခြင်းတို့ ဖြင့် စွန့် လွှတ်ခြင်းသည်သာ ပိုကောင်းသည်မဟုတ်ပါလား။ထိုနေ့ ထိုရက်မှစရ်ျ ကျွန်မဘ၀တွင် အချစ်ကန့် လန့်ကာ တစ်ချပ်အပြီးတိုင်ချသွားခဲ့လေသည်။
မိုးရေစက်များအကြား…အတိတ်အကြောင်းကို တွေးတောနေသည်မှာ မည်မျှကြာသည်မသိ။
ကားဟွန်းတီးသံအချို့ဘေးနားက အသံအချို့ ကြားတော့မှ ကျွန်မ ပြန်လည် အသိဝင်လာသည်။ကျွန်မအိမ်ပြန်ဖို့ တောင် နောက်ကျနေပါရောလား။
မိုးစက်များကို နှုတ်ဆက်ရန် မိုးပေါ်ကို ပြန်မော့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ မိုးရေစက်တွေကား
မရှိတော့။မိုးစက်တို့ မရှိတော့သော်ငြားကျွန်မဧ။်ပါးပြင်ပေါ်သို့ ကျဆင်းလာသည့် ရေစက်အချို့သည် မိုးရေစက် အကျန်တစ်ချို့ လား။ဒါမှမဟုတ် အချစ်လက်ကျန် မျက်ရည်စက်အချို့ လားဆိုတာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ပင် မသိ။ဝေခွဲရ်ျကြည့်နိုင်သော စိတ်စွမ်းအားလည်း မရှိတော့သဖြင့် မိုးနှင့်အတူ အလွမ်းများကိုပါ ထားရစ်ကာ နှုတ်ဆက်ခဲ့တော့သည်။ဒီဘ၀ ဒီမျှနှင့်တင် ရှိပါစေတော့လေ…။
မေ့လက်စနဲ့ မေ့တော့မှာတဲ့လား ကိုအလင်းဆက်ရယ်။ ကျွန်မ အကြွေးတွေ ပြန်မဆပ်တော့ဘူးလား။
စပါးပေါ်ရင် ကြည့်ကျက် ဆပ်ပါ့မယ်
Lဆိုင်းဇီ နဲ့ ပဲလွမ်းတော့မယ်
ဒီနေ့ မန်းမှာမိုးတွေရွာလို့မိုးနဲ့ပက်သက်ပြီးတစ်ခုခုခံစားနေမိ သလိုလိုဖြစ်မိတယ်
အော်.. ရယ်သောသူလဲ မရယ်နိုင်တော့ပါလား.. Own Tune လား… Own Event လားဗျ…